Ny fampiasana olon-dehibe ao Illinois - Fampiasana ara-dalàna ny marijuana any Illinois
Mampiasa famintinana cannabis ny Illinois
Ny Illinois Adult Use Cannabis dia ho tonga amin'ny 1 Janoary 2020, raha ny lalàna natolotry ny Demokraty ary notohanan'ny Governemanta. Nanazava ny lalàna momba ny marijuana
Ny fampiasana ny olon-dehibe ao Illinois dia mampiasa ny lalàna cannabis
Ity ny famintinana ny fampiasana ny olon-dehibe avy amin'ny JB Pritzker tamin'ny Mey, 2019. Izay lasa lalàna hafa.
Raha mila an Fahazoan-dàlana hitrandraka ao Illinois - kitiho eto.
Raha mila a fahazoan-dàlana hitombo asa-asa any Illinois - kitiho eto.
Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hanaovan'i Illinois ara-dalàna ny olon-dehibe?
Nanomboka ny 1 Janoary 2020, ny olon-dehibe mihoatra ny 21 dia afaka mividy ara-dalàna ny cannabis ho an'ny fampiasana fialamboly avy amin'ireo dispensaries nomena anarana manerana ny fanjakana Illinois.
Ho an'ny volavolan-dalàna 522 pejy Kitiho eto
Fetra famonoana otrikaretina:
Ny fananana rongony dia tsy misy fetrany, rongony grama eo ho eo no azon'ny olon-dehibe iray mipetraka any Illinois ara-dalàna - satria miangona ny fahasimbana ary mila ampiana miaraka, afa-tsy ny fitomboan'ny trano.
Mponina ao Illinois
Voninkazo rongony 30 grama
5 grama cannabis mifangaro
500 mg ny THC cannabis infused vokatra; na
Zavamaniry 5 ho an'ireo Mponina manana mari-pahaizana mendrika
Mponina tsy any Illinois
antsasaky ny vola amin'ny mponina any Illinois
tsy misy trano mitombo amin'ny tsy mponina
Ny olon-dehibe dia mampiasa rongony cannabis tsy manova Illinois rongony rongony
Mampirisika ny fitovian-jo ny fanarahan-dalàna ao amin'ny marijuana
The lalàna manara-dalàna ny cannabis any Illinois mikasa ihany koa ny manamboatra ny tsy rariny tamin'ny lasa tamin'ny alàlan'ny famoronana mpiditra vaovao amin'ny tsenan'ny rongony ho an'ireo "mpangataka fitoviana ara-tsosialy." Fandaharam-bola indram-bola mitentina 20 tapitrisa dolara amerikana no hotantanan'ny Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) ho an'ireo "mpangataka ara-bola ara-tsosialy."
Mpiara-miasa amin'ny fitoviana ara-tsosialy ao amin'ny Illinois Cannabis Law
Ny mpangataka fizahana ara-tsosialy dia mponina ao Illinois izay mahafeno farafaharatsiny manaraka ireto:
Ny mpampiasa iray farafahakeliny 51 isanjaton'ny fananana sy fifehezana olona iray na maromaro no nipetraka tamin'ny farafahakeliny 5 tamin'ny 10 taona talohan'izay tao amin'ny faritra nisy fiantraikany.
Ny mpangataka manana fananana 51 farafaharatsiny farafahakeliny na olona iray na maromaro izay nosamborina, voampanga, na nanameloka azy ho paroasin'ny fitsarana lefitra noho ny fandikan-dalàna izay mendrika havoaka eo ambanin'ity lalàna ity na mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray voakasik'izany.
Mipetraka ao amin'ny faritra misy fiantraikany miaraka amin'izao fotoana izao; na
Nosamborina noho ny heloka na voampanga ho adidy ao amin'ny fitsarana lefitra noho ny fandikan-dalàna izay mendrika fandroahana eo ambanin'ity lalàna ity na mpikamban'ny fianakaviana iray voakasik'izany.
Isa 25 amin'ny 200 ho an'ny "mpangataka vaovao" dia hiorina amin'ny "Mpangataka Equity ara-tsosialy.
Ireo mpangataka vaovao any amin'ny tsenan'ny tsiranoka any Illinois
Ny Departemantan'ny Fambolena dia hamolavola - amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitsipika - kajy handraisana isa ireo mpangataka vaovao amin'ny sehatry ny rongony hampiasa olon-dehibe ho an'ny foibe fambolena, dispensary ary mpamboly asa-tanana.
Ny isa dia mifototra amin'ny fampahalalana avy amin'ny lalàna, izay mizana 200. Teboka 25 dia mipoitra avy amin'ny mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy, ary isa fanampiny 12 ho an'ny mpangataka rongony vaovao azo omena:
Ny asa sy ny asa (2)
Fifanekena amin'ny fandriam-pahalemana (2)
Tatitra momba ny vondrom-piarahamonina / manodidina
Drafitra momba ny tontolo iainana (2)
Tompona Illinois (2)
Drafitra hampiasana fiaraha-monina (2)
Fepetra momba ny fananganana orinasa cannabis any Illinois
Tsy misy olona na fikambanana manana tombontsoa ara-dalàna, mirindra, na mahasoa, mivantana na ankolaka, manana toeram-pitrandrahana mihoatra ny 3.
Tsy misy olona na fikambanana manana tombontsoa ara-dalàna, mirindra, na mahasoa, mivantana na ankolaka, fikambanana 10 mahery.
Tsy misy fahazoan-dàlana hividianana mpiasa na iza na iza na iza na iza na iza na iza manana tombony mihoatra ny 10% amin'ny ivon'ny fambolenaNy fahazoan-dàlana hividianana mpiasa dia tsy maintsy avoaka ho an'ny olona na fikambanana izay manana tombony mihoatra ny 10% amin'ny ivontoeram-pambolena.
Tsy misy olona na fikambanana manana fahazoan-dàlana ara-dalàna, fitoviana, fananana, na tombontsoa mahasoa, mivantana na ankolaka, manana fahazoan-dàlana mavesatra iray amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity.
Ny fananganana sata "mpangataka ara-tsosialy" ho an'ny fahazoan-dàlana
Ny mpangataka ara-tsosialy dia mpanafika ara-tsosialy dia olona iray mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Ny mpangataka manana fananana sy fifehezana 51 isanjato farafaharatsiny avy amin'ny olona iray na maromaro no nipetraka tamin'ny farafahakeliny 5 tamin'ny 10 taona talohan'izay tao amin'ny faritra misy fiantraikany.
Ny mpangataka manana fananana sy fifehezana 51 isanjato farafaharatsiny avy amin'ny olona iray na maromaro izay nosamborina, voampanga, na nanameloka azy ho paroasin'ny fitsarana lefitra noho ny fandikan-dalàna izay mendrika ny fandaniam-bola eo ambanin'ity lalàna ity na mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray voakasik'izany. ;
Ho an'ireo mpangataka manana mpiasa ambany indrindra farafahakeliny 10, mpangataka iray izay misy 51% farafahakeliny mpiasa ankehitriny:
illinia olon-dehibe mampiasa famintinana amin'ny lalàna vaovao cannabis
Fangatahana ho an'ireo tompon-trano vaovao any amin'ny tsenan'ny cannabis any Etazonia
Drafitra fanamarinana ho an'ny fotoampitantanana. (Ny departemantan'ny fambolena dia hamolavola fomba mitovy amin'ny alàlan'ny fizotran-dalàna ho an'ny foiben'ny fambolena, olontsotra ary mpamokatra asa tanana.) Ny lalàna dia misy ny fizotry ny famoahana IDFPR izay hampiasaina hamerenana ireo rindranasa.
Amin'ny isa 200 isa, isa 25 no voatondro manokana ho an'ireo mpangataka izay mendrika ho "mpangataka ara-tsosialy."
IDFPR dia mety hanome vola 12 isa ho an'ireo mpangataka tadiavina, saingy tsy takiana akory. Ireo hetra amin'ny alàlan'ny bonus dia homena raha toa ka mahazo ny rindranasa maromaro betsaka kokoa ny sampana mifanaraka amin'ny isa kely indrindra amin'ny isa takiana.
Ny Departemantan'ny Fitantanam-bola sy ny Professional dia ny mandany 50 isan-jaton'ny fangatahana fahazoan-dàlana tsy azo averina (hatramin'ny fangatahana 2) ary ny saram-bola tsy azo averina miaraka amin'ny fividianana fahazoan-dàlana hikarakarana orinasa mpamokatra rongony (hatramin'ny fahazoan-dàlana roa) raha toa ka mifanaraka amin'ny fepetra sasany ny mpangataka ara-tsosialy.
Fampihenana ny vidiny mialoha ny fahazoan-dàlana vaovao
Ireo mpangataka izay manana fahazoan-dàlana fandefasana fepetra dia hanana 180 andro manomboka amin'ny daty hanomezana ny mari-toerana ho an'ny fivarotana fivarotana fivarotan-tena rehefa mahazo alalana hiditra ao an-tsena ireo mpandray anjara vaovao. Io dia hampihena ny vidin'ny fidirana amin'ny indostria.
FAMPISEHOANA NY FIVAVAHANA AN-TOKONY AZONY ETO AZONDRINDRA INDRINDRA SY NY FIAINANA
Ity dingana manaraka ity dia natao mba hiantohana ny tsena maharitra indrindra ao amin'ny firenena.
Ny fahazoan-dàlana taloha amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe mihazona fahazoan-dàlana ara-pahasalamana ankehitriny
Ny fambolena rongony ara-pitsaboana dia mety mangataka fahazoan-dàlana ao anatin'ny 60 andro taorian'ny daty mahomby amin'ny lalàna.
Hizara ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mpangataka mendrika ao anatin'ny 45 andro.
Fikambanana mpiady hevitra:
Ny dispensaries ara-pitsaboana dia mety mangataka fahazoan-dàlana ao anatin'ny 60 andro taorian'ny daty mahomby amin'ny lalàna.
Hizara ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mpangataka mendrika ao anatin'ny 14 andro.
Hanomboka ny 1 Janoary 2020 ny fivarotana ny fampiasana ozika ho an'ny olon-dehibe.
Ireo sampandraharaha ireo dia mety mangataka fahazoan-dàlana faharoa amin'ny toerana vaovao eo ambanin'ny tarehimarika mitovy.
Ny fahazoan-dàlana hisian'ny fahazoan-dàlana voalohany amin'ny fampiasana olon-dehibe
Sarany tsy azo averina: $ 100,000
Vola famatsiam-bola ho an'ny vondron'aretina an-tsena: 5% amin'ny varotra eo anelanelan'ny 1 Jolay 2018 ka hatramin'ny 1 Jolay 2019 na $ 500,000, izay mbola kely kokoa.
Sarany tsy azo averina: $ 30,000
Vola famatsiam-bola ho an'ny vondron'aretina an-tsena: 3% amin'ny varotra eo anelanelan'ny 1 Jolay 2018 ka hatramin'ny 1 Jolay 2019 na $ 100,000, izay mbola kely kokoa.
Sarany tsy azo averina: 30,000
Vola famatsiam-bola ho an'ny sehatry ny famokarana cannabis: $ 200,000
Mpikambana vaovao ho an'ny olon-dehibe mampiasa varotra rongony
Mpamboly asa tanana
Fandaharana ho an'ny fanitarana orinasa cannabis New Illinois
ANDRO FANAO 1
Departemantan'ny Fitantanam-bola sy matihanina
1 Mey 2020: Ny masoivoho dia manome alalana amin'ny fikambanan'i 75 vaovao
1 Jolay 2020: Ny lisansa masoivoho dia manome lisansa 40 ho an'ny mpamoaka lalana, hatramin'ny lisansa 40 ho an'ny mpamboly mpanao asa tanana, ary fahazoan-dàlana ho an'ny orinasam-pitaterana.
ANDRO FANAO 2
21 Desambra 2021: Nahazo lisansa 110 ho an'ny fikambanana vaovao misy ny vaovao ny masoivoho
21 Desambra 2021: Ny lisansa masoivoho dia manome alalana 60 ho an'ny mpamboly mpanao asa tanana, hatramin'ny fahazoan-dàlana 60 ho an'ny mpampindrana, ary fahazoan-dàlana ho an'ny orinasam-pitaterana.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fidirana vaovao ao amin'ny tsenan'ny cannabis Illinois
Vola fampangatsiahana tsy azo averina
MITADIAVO INDRINDRA MAMPISEHOANA KOA AZY MANGANA AN-TRANO KINDY IO
Ny volavolan-kevitra dia hanangana programa manome làlana vaovao, programa famerenana indray ny vondron-tsika (ROC), mba hampanjariam-bola amin'ireo vondrom-piarahamonina tena mijaly indrindra noho ny politika fanavakavahana.
Famintinana fandaharan'asan'ny ROC
I ICJIA dia manendry ny "ROC Area" na toerana mety ahafahan'ny mpangataka hangataka vola amin'ny alalàn'ny ROC.
Ny birao ROC dia ahitana mpikambana 22 mahery ary hotarihin'ny Governemanta, na ny mpanendry azy, ary ny mpisolovava mpisava lalana, na ny mpanafika azy.
Ny Birao ROC dia hamoaka fangatahana fanomezana, fangatahana fangatahana avy amin'ireo faritra azon'ny ROC, mizara fanomezana amin'ny fanjakana, ary manara-maso sy manombatombana ny programa ROC.
Ny Birao ROC dia hanatitra tatitra isan-taona any amin'ny biraon'ny Governemanta momba ny fivoarany.
MISAOTRA MBOLA MAHAFINARITRA TSY MISY AZONY SA ILLINOIS
Ireo hadisoana manaraka ity dia azo ekena amin'ny fandaniam-bola.
Fizarana 4 famotsorana (tsy fanarahan-dalàna ny olona manana fananana matavy amin'ny vola manaraka)
a. <10g Fanitsakitsahana lalàna sivily
Azo omena ny fanadinana sy fiampangana voaroaka §10 (a)
b. 10-30g Kilasy B Misdemeanor
c. 30-100g Kilasy A Misdemeanor
e. 100-500g Kilasy 4 Felony 1-3 taona
Fizarana 5 Mpanamboatra / Fanaterana
(tsy fanarahan-dalàna ho an'izay olona mahalala tsara ny manamboatra, mampita, na manana finiavana hanolotra na hamokatra rongony amin'ireto karana ireto
a. <2.5g Kilasy B Misdemeanor
b. 2.5-10g Kilasy A Misdemeanor
c. 10-30g Kilasy 4 Felony
Fizarana 8 Zavamaniry (tsy fanarahan-dalàna ho an'izay olona namorona na nanam-boly sativa zavamaniry raha tsy nahazo alalana hanao tanjona fikarohana)
a. <Zava-maniry 5 Kilasy A Misdemeanor
b. Zavamaniry 5-20 Kilasy 4 Felony
Ny dingana ho an'ny fanitarana ny famonoana otrikaretina Illinois
Ny volavolan-kevitra dia namolavola fomba haingana dia haingana amin'ny fanitarana ny antontan-taratasin'ny heloka bevava ataon'ireo olona nosamborina, voaheloka, fanaraha-maso, na fanenjehana ho fanitsakitsahana na fanitsakitsahana ataon'ny kilasy faha-4 amin'ny lalàna mifehy ny fanjifana. Ny tanjona voalohany amin'ity fizarana ity dia ny (1) ireo rakitsary mifandraika amin'ny tsiranoka, ary (2) manaparitaka ny fizotran'izany.
Ny dingana fanaleana mandeha ho azy dia mitaky manaraka izao:
Ny Departemantan'ny Polisiam-panjakana dia tsy maintsy mamantatra ny olona rehetra manana rakitsoratra mpanao heloka azo ekena amin'ny fandroahana ary mampandeha an-tsakany sy an-davany ireo firaketana tsy fanarahan-dalàna mandritra ny roa taona taorian'ny vanim-potoana fampiharana ny lalàna.
Tao anatin'ny 180 andro taorian'ny daty nahomby tamin'ity hetsika ity dia tokony hampandre (a) ny biraon'ny mpampanoa lalàna izay tompon'antoka amin'ny fanenjehana ireo fandikan-dalàna, ny b biraon'ny mpampihatra lalàna eo an-toerana, ary (c) ny biraon'ny mpisolovava any Illinois izay mampahafantatra ny olona rehetra miaraka amin'ny fanitsakitsahana madinidinika mety ekena.
Tao anatin'ny 180 andro taorian'ny nahazoana ny fampandrenesana avy amin'ny Departemantan'ny polisy, ny biraon'ny mpisolovava ara-dalàna dia hametraka baiko soso-kevitra miaraka amin'ny fitsarana mitady fandaniana ho an'ny olona manana heloka mendrika. Ny biraon'ny mpisolovava dia mety hametraka ny volavolan-dalàna ilay volavolan-dalàna raha tsy nisy ny mpisolovava ny fanjakana.
Tao anatin'ny 180 andro aorian'ny nandraisany ilay volavolan-kevitra natolotra, ny fitsarana dia hamerina handinika ny baiko andrana ary hanafatra ny fitrandrahana fitsarana sy ny fampiharana ny lalàna raha tsy hoe mamaritra ny tsy fandikana izany ny famaritana ny fanitsakitsahana kely.
Ny fitsarana dia hanome kopy ny baiko ho an'ny Departemantan'ny polisy, ny masoivoho fisamborana, ny masoivoho ara-drariny mifandraika amin'ny heloka bevava, ary ny olona izay nitazona ny firaketany.
Ny fizotran'ny fahazoana mandeha ho azy dia tsy mihatra amin'ny olona diso fanitsakitsahana na fanitsakitsahana ataon'ireo Kilonga 4 izay niaraka tamin'ny fiampangana ankoatra ny heloka mendrika. Ireo olona manana firaketana an-tsoratra, sy ireo olona hafa amin'ny toe-javatra hafa, dia mety mangataka amin'ny fitsarana tsy hitokana ny firaketany.
NY FOMANANA DIA MITARIKA NY CANNABIS AN-ILLINOIS
Tsy misy na inona na inona ao amin'ilay tolo-kevitra mandrara ny mpampiasa tsy hametraka politika mety amin'ny fifohana sigara, ny fanjifana, ny fitahirizana na ny fampiasana zava-mahadomelina ao amin'ny toeram-piasana.
Tsy misy na inona na inona ao amin'ny tolo-kevitra mandrara ny mpampiasa hanao famaizana amin'ny mpiasa iray na manakana ny asa ananan'ny mpiasa iray noho ny fanitsakitsahana ny politikam-piasan'ny mpampiasa na ny politikam-pitsaboana.
SORATRA FAMPISEHOANA NY FAHADIANA CANNABIS ANY ILLINOIS
Ny haba rehetra dia apetraka ao amin'ny Tahiry Fandrindrana ny cannabis vaovao
Hetra alaina ho an'ny kolontsaina
7% amin'ny vola mivoaka avy amin'ny fivarotana cannabis amin'ny mpamboly, mpanamboatra asa tanana, na processor amin'ny fikambanana mandefa
Hetra alafa amin'ny fividianana cannabis:
10% amin'ny vidin'ny fividianana - Cannabis miaraka amin'ny haavon'ny THC eo amin'ny 35% na ambany
20% amin'ny vidin'ny fividianana - vokatra voan'ny otrikaretina rehetra
25% amin'ny vidin'ny fividianana - Cannabis miaraka amin'ny haavon'ny THC mihoatra ny 35%
Ireo hetra ireo dia ho fanampin'ny asa hafa rehetra, tombontsoany, na hetra aloan'ny fanjakana any Illinois na amin'ny vondron-tanana monisipaly na fizarana politika.
Hanao hetra any ambanivohitra:
Ny kaominina dia mety handrafitra hetra nivarotra hatramin'ny 3% ny fiakaran'ny 0.25%
Ny firenena dia mety hampandoa hetra ny mpivarotra hatramin'ny 0.5% any amin'ireo faritra nampidirina
Ny faritra tsy tafiditra dia mety handoa hetra amin'ny mpividy amin'ny 3.5% amin'ny fiakaran'ny 0.25%
FAHORO ANDRIAMANITRA DAHOLO IZAO DIA MOMBA NY VOLANA CANNABIS
Ny departemanta misahana ny fidiram-bolan'ny dia hanome ny tombam-bidy ofisialy FY20 amin'ny andro ho avy.
Ny vola miditra amin'ny hetra dia hapetraka ao amin'ny Tahirim-pamerenana mifehy ny cannabis vaovao
Ireo sampan-draharaham-panjakana tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny programa ho an'ny olon-dehibe dia hahazo loharanom-bola hamatsiana ny vidin'ny mpitantana avy amin'ny hetra alain'ny programa.
Ny vola sisa rehetra dia arotsaka toy izao manaraka izao:
35% no hafindra any amin ny Tahirim-bolam-panjakana ankapobeny,
25% no hafindra amin'ny famerenana indray ny Tahirim-bolan'ny Commune ho an'ny asa fanarenana ny fiarahamonina,
Ny 20% dia hafindra ho vola iray izay hanohana ny serivisy ara-tsaina sy ny fanararaotan-tsakafo
any amin'ny departemantan'ny fahasalamana any an-toerana,
Ny 10% dia hafindra any amin'ny Tahirim-bola fanamafisana ny Tetibola mba handoavana ny volan'ny volavolan-dalàna tsy voaloa,
Ny 8% dia hafindra any amin'ny Birao fanatanjahantena sy fanatanjahan-tena any Illinois mba hamorona programa manome ny fampiharana ny lalàna, ary
2% dia hafindra any amin'ny Tahirim-pahasalamana momba ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina mba hamatsiana ny fampianarana ho an'ny daholobe sy ny fanentanana.
FAHAMARINANA NY FAHADIANA ILLINOIS CANNABIS
Ny governora dia hanendry Mpiandraikitra mpanara-maso ny fanondranana cannabis izay hijanona ao amin'ny IDFPR. Io olona io sy ny ekipany dia hanana fahefana hanao tolo-dalàna momba ny lalàna sy lalàna momba ny fampiasana ny olon-dehibe. Ity olona ity dia handrindra ny ezaka eo amin'ny masoivohom-panjakana voakasik'izany amin'ny famolavolana sy ny hetra amin'ny fivarotana rongony any Illinois.
Departemantan'ny vola miditra
Tompon'andraikitra amin'ny fampiharana sy manangona hetra mifandray amin'ny fivarotana cannabis.
Andraikitry ny fahazoan-dàlana sy ny fanaraha-maso ny ivontoerana fambolena, mpanamboatra asa tanana, ny fikarakarana fikambanana ary ny fitaterana fitaterana.
Tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana ireo laboratoara izay manandrana testnatera
Andraikitry ny fahazoan-dàlana sy ny fanaraha-maso ny fikambanana dispensing.
Polisin'ny fanjakana Illinois
Andraikitry ny fitarihana ny mombamomba ny olona rehetra voarohirohy amin'ny sehatry ny voan-trondro.
Tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny drafi-pandriam-pahalemana ho an'ireo tompon'andraikitra manana alalana rehetra.
Tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny fampahalalana momba ny tantaran'ny heloka bevava sy ny fahafantarana ny olona rehetra misy fandikan-dalàna madinika izay mendrika fitrandrahana mandeha ho azy.
Tompon'andraikitra amin'ny famolavolana tolo-kevitra momba ny fampitandremana ara-pahasalamana sy ny fanamorana ny Komity Mpanolotsaina momba ny fahasalamana ho an'ny daholobe.
Departemantan'ny varotra sy fizarana ara-toekarena
Andraikitry ny fitantanana ny programa fampindramam-bola, programa manome, ary fanampiana ara-teknika ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy.
Sampan-draharaha misahana ny fanompoana olona
Andraikitry ny fanaovana soso-kevitra amin'ny Komity Mpanolotsaina momba ny fahasalamana ho an'ny daholobe momba ny fitsaboana sy fisorohana.
Tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy fanaparitahana ny fitaovam-pampianarana ho an'ny mpanjifa.
Tompon'andraikitra amin'ny fananganana faritra ROC manerana ny fanjakana izay mety hangataka vola amin'ny birao ROC ho an'ny fanarenana ny fiaraha-monina.
FAHASALAMANA SY FAHASANA HO AN’NY MPANOLAKA MBOLA MISY
Roapolo isan-jaton'ny vola novokarin'ny fivarotana cannabis ho an'ny olon-dehibe no hanohana ny ezaka hamahana ny fanararaotana an-tsokosoko sy ny fahasalamana ara-tsaina.
Famerana amin'ny dokam-barotra amin'ny orinasan-tsena
Tsy misy toeram-piasana cannabis na mametraka na mihazona, na mahatonga azy hametraka na hihazona azy, dokambarotra, ny tsiranoka na vokatra vita amin'ny cannabis amin'ny endriny na amin'ny alalàn'ny medium:
Mihoatra ny 1,000 21 metatra ny elanelan'ny toeram-pianarana, kianja filalaovana, hopitaly, tobim-pitsaboana, ivon-toeram-pialam-boly na ivon-toeram-pialam-boly, foibe fikarakarana ankizy, valan-javaboary na tranomboky an'ny besinimaro, na misy arcade izay tsy ahafahan'ny fidirana mankamin'ny XNUMX taona na mihoatra;
Mandeha na anaty fiara fitateram-bahoaka na fialofana fitateram-bahoaka;
Amin'ny na amina fananana ampahibemaso na fananana ampahibemaso;
Izay mirakitra fampahalalana diso na mamitaka, mamporisika ny fanjifana tafahoatra, mampiseho ny olona iray latsaky ny 21 taona dia mihinana ny fahana, dia ahitana ny sarin'ny ravinkazo; na
Ao anatin'izany ny sary natao na mety hanintona ny zaza tsy ampy taona, ao anatin'izany ny sary an-tsary, kilalao, biby, na ankizy, na ny mety ho fitoviana sary, toetra na fehezanteny izay ampiasaina amin'ny fanaovana dokam-barotra amin'ny ankizy, na ny fanahafana ireo fonosana na labie. na manosika ny fanjifana rongony.
Ireo fameperana ireo dia tsy mihatra amin'ny hafatra tsy komersial.
Ny fahazoana fonosana an'i cannabis Illinois
Ity fampitandremana manaraka ity dia mihatra amin'ny vokatra rehetra dia: "Ity vokatra ity dia misy cannabis ary nokasaina ho an'ny olon-dehibe 21 taona mahery. Ny fampiasana azy dia mety hanimba ny fahafantarana ary mety ho fahazarana mahazatra. Ity vokatra ity dia tsy tokony ampiasain'ny vehivavy bevohoka na mampinono. Tsy ara-dalàna ny mivarotra na manome an'io zavatra io ny olon-drehetra, ary mety tsy hoentina any ivelan'ny fanjakana Illinois. Tsy ara-dalàna ny manodina fiara mandeha môtô raha eo ambanin'ny fitaoman'ny cannabis. Ny famoanana na fampiasana an'io vokatra io dia mety hitondra sazy ara-dalàna manan-danja amin'ny lalàna sasantsasany ary ambanin'ny lalàna federaly. "
Ny tafio-drivotra voajinja rehetra voatokana hozaraina amin'ny orinasam-bary dia tsy maintsy amboarina ao anaty fitoeran-tombo-kase voatondro.
Ny fonosana vokatra misy misy otrikaretina dia tsy azo atao ny miaro ny zaza ary mifanaraka tsara amin'ny fenitra ankehitriny, ao anatin'izany ny fenitry ny Vaomiera momba ny fiarovana ny vokatra momba ny mpanjifa resahina ao amin'ny lalàna misoroka ny poizina.
Ny marika isaky ny vokatra cannabis dia tokony hisy, ankoatry ny zavatra hafa, daty "fampiasana" amin'ny mari-pamantarana, ny habetsahan'ny cannabis ao anaty vokatra ary ny lisitry ny votoaty.
Ny vokatra cannabis rehetra dia tsy maintsy misy fanambarana fampitandremana napetraka ho an'ny mpanjifa, amin'ny habeny iray azo heverina sy mora hitan'ny mpanjifa mandinika fonosana iray, izay mety tsy ho voarona na hadalana amin'ny fomba rehetra.
Ny fonosana dia tsy tokony hisy fampahalalana momba izany:
Diso ve sa mamitaka;
Mampirisika ny fanjifana be loatra;
Mampiseho ny olona iray latsaky ny 21 taona mihinana ganja;
Ao anatin'izany ny sary natao na mety hanintona ny zaza tsy ampy taona, ao anatin'izany ny sary an-tsary, kilalao, biby, na ankizy, na ny fitoviana amin'ny sary, toetra na fehezanteny izay ampiasaina amin'ny dokam-barotra amin'ny ankizy, na izay fonosana na marika hafa izay mitovy amin'ny izay vokatra azo amidy noho ny vatomamy azo ampiasaina amin'ny varotra, na manentana ny fanjifana rongony;
Ny misy tombo-kase, sainam-pirenena, crest, palitao, na akanjo hafa dia mety hamitaka ny mpanjifa hino fa ny vokatra dia notohanan'ny, na namboarina ho an'ny State Illinois.
HOME GROW FOR CANNABIS ANY ILLINOIS
Ny tokatrano any Illinois dia avela hitombo hatramin'ny alàlan'ny zava-maniry dimy hanina ao anaty fepetra sasany:
Ny mpamafy dia olon-dehibe izay 21 taona na mihoatra
Ny mpamboly dia ao amin'ny trano iray izay manana trano ary nahazo alalana avy amin'ny tompony,
Ny mpamboly dia voafetra amin'ny fambolena zavamaniry 5 na latsaka.
Ny mpamboly dia tsy maintsy mihazona rongony ao anaty efitrano mihidy tsy lavitra ireo mpikambana ao an-trano izay eo ambanin'ny 21 taona, ary
Voarara ny mpamboly tsy mihabetsaka ny fihenan-tsasatra any amin'ny fahitan'ny besinimaro.
NY FIKAMBANANA MAMPIKOROKANA MOMBA NY FAMPISEHOANA ANY CANNABIS ANY ILLINOIS
Ny kaominina dia afaka mandefa ôrdônansy mandrara ny fametrahana ny dispensaries eo amin'ny sehatra iandraiketan'izy ireo.
Ny orinasam-panjakana eo an-toerana dia tsy maintsy mandray ny ôrdônansy 'mifidy' ao anatin'ny herintaona amin'ny vanim-potoanan'ny lalàna na voafetra ny fahazoan-dàlana 'hisafidy amin'ny alàlan'ny fitsapankevi-bahoaka eo an-toerana.
Ny kaominina dia mety hampiharana fameperana mety momba ny fambolena mifandraika amin'ireo ivontoerana fambolena manana alalana, mpanamboatra asa tanana, fikarakarana fikambanana ary dispensaries
Hihaona tsy ho ela - haingana kokoa raha misoratra anarana ianao.
Aza adino ny misoratra anarana. @ https://www.youtube.com/cannabislegalizationnews